Madaxweyne Trump Oo Masar Ugu Baaqay Inay Burburiso Biyo-xidheenka Itoobiya – somalilandtoday.com
(SLT-Washington)-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cadho xooggan u muujiyey Ethiopia, Jimcihii, sababo la xidhiidha biyo-xidheenka ay ka sameyneyso Webiga Nile, wuxuuna soo jeediyey in Masar ay burburin doonto.
Trump ayaa hadalkan sheegay isaga oo ku dhowaaqayey heshiis ay xidhiidh ku yeelanayaan Israa’iil iyo Sudan, oo sidoo kale cabsi xooggan ka qabta in biyo-xidheenkaas uu yareyn doono biyaha ay ka hesho webiga.
“Waa xaalad aad halis u ah, sababta oo ah Masar uma dulqaadan doonto,” ayuu Trump weriyayaasha ugu sheegay Aqalka Cad, ayada oo taleefonkana ay ku jiraan hogaamiyayaasha Israa’iil iyo Sudan.
“Way burburin doonaan, waana sheegay, si cadna waan u sheegayaa – Masar way burburin doontaa biyo-xidheenkaas. Waana inay wax ka qabtaan,” ayuu yidhi Trump.
“Waxay ahayd inay ka hortagaan ka hor inta aan la billaabin [dhismaha biyo-xireenka],” ayuu yidhi Trump oo shalay ka muujiyey in Masar uu qalaalse ka jiray markii la billaabay dhismaha biyo-xidheenka sannadkii 2011, xilligaas oo la riday dowladdii Masar ee Mubarak.
Waaxda Arrimaha Dibedda Mareykanka ayaa bishii September sheegtay inay jareyso kaalmada ay siiso Ethiopia, sababo la xidhiidha in Addis Ababa ay billowday buuxinta biyo-xidheenka.
“Heshiis ayaan dhex dhigay, kadibna nasiib-darro Ethiopia ayaa jebisay heshiiska, taasi oo ay ahayd in ayna marnaba sameyn. Taasi qalad weyn ayey aheyd,” ayuu yidhi Trump.
“Marnaba ma arki doonaan lacagtaas [kaalmada Mareykanka] illaa ay u hoggaansamaan heshiiska,” ayuu yidhi.
Ethiopia weli kama ayna jawaabin hadalka kasoo yeedhay Trump.